कपाल विकासको लागि खुशी कपाल लोशन | सौन्दर्य समीक्षा
कपाल को वृद्धि को लागी खुशी कपाल लोशन
कपालको बृद्धिका लागि ब्लिस कपाल लोशन एक नवीन उत्पादन हो जुन कमजोर र पातलो कपाललाई कats्गाल गर्छ। यसले कपाललाई यसको प्राकृतिक शक्तिमा पुनर्स्थापित गर्दछ र नयाँ कपालको बृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
यो द्वारा उत्पादित छ Hendelको बगैचा र कपाल र टाउकोको लागि गहन हेरविचार प्रदान गर्दछ। उत्पादन पातलो र कमजोर कपालको साथसाथै कपाल झर्नको लागि सिफारिस गरिन्छ। परमान कपालले छोटो अवधिको अवधिमा यी कस्मेटिक त्रुटिहरू हटाउन मद्दत गर्दछ। उत्पादसँग तरल स्थिरता छ र यो सुविधाजनक 50 मिलि बोतलहरूमा बेचिन्छ, यसलाई प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँदछ।
रचना र कपाल को विकासको लागि परमान कपाल लोशन को गुणहरू
उत्पादनमा तरकारी मूलको सबै प्राकृतिक सक्रिय पदार्थहरू छन्। कपाल र टाउकोको लागि अति पौष्टिक जटिल मा निम्न बोट निकासी समावेश गर्दछ: avocado, बहुभुज मल्टिफ्लोरम, बैजनी अल्फल्फा, ligusticum, सेन्टेला एशियाटिका। आउनुहोस् सामग्रीहरूमा नजिकबाट हेरौं:
एभोकैडो एक्स्ट्र्याक्ट। एवोकाडो निकासीमा भिटामिन एफ, ई, डी, बी समावेश छ र टाउकोको बाहिरी सतहमा प्रवेश गर्न सक्षम छ, उपयोगी पदार्थहरू वितरण गर्दै। यसले प्रभावी रूपमा ड्राईनेस, फ्ल्याकिंग, डन्ड्रफ र कपाल झर्ने समस्या हटाउँछ
अल्फल्फा निकाल्नुहोस्। अल्फल्फा निकाल्ने को सुदृढीकरण प्रभाव छ, टाउकोको छाला र कपाल बल्बमा पोषक तत्व शोषण को सुविधा प्रदान। यसले रक्त परिसंचरणमा सुधार गर्दछ र कपालको फोलिकल्समा उत्तम रक्त प्रवाह प्रदान गर्दछ।
बहुभुज मल्टिफ्लोरम एक्स्ट्रैक्टt यो निकासी एक antioxidant मानिन्छ र एक शक्तिशाली कायाकल्पित प्रभाव छ। यसले सक्रिय रूपमा कपाल झर्ने र खैरो कपाललाई रोक्दछ।
सेन्टेला एशियाटिका निकासी। यस पदार्थले कोलेजेनको संश्लेषणलाई उत्तेजित गर्दछ, स्क्याल्पमा रक्त संचार सुधार गर्दछ, र फ्रि रेडिकलहरूलाई नष्ट गर्दछ। यसले कपाल र टाउकोको सूखापन रोक्दछ। सेन्टेला एशियाटिकामा समावेश एशियाटियाकोसाइडले कपालको बृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
Ligusticum अर्क। यस कम्पोनेन्टले स्क्याल्पमा कन्डिसन प्रभाव प्रदान गर्दछ। यसले रक्त परिसंचरण, टोनहरू, सानो घाउहरू निको पार्ने, सुथरी र dermis को पुनर्जीवनमा सुधार गर्दछ।
थप रूपमा, लोशनले क्रान्तिकारी हॉटफ्लक्स घटक समावेश गर्दछ, जुन विकसित गरिएको छ Hendel बगैचाको प्रयोगशालाहरू।
कहाँ ब्लिस हेयर होम सिस्टम खरीद गर्ने
हाल, ब्रान्ड नयाँ उत्पाद अहिले सम्म औषधि र कस्मेटिक स्टोरहरूमा उपलब्ध छैन। मूल उत्पादन निर्माताको आधिकारिक साइट मार्फत विशेष रूपमा बेचिन्छ।
परमान कपाल को लाभदायक गुणहरु
लोशनमा समावेश भएको स्वस्थ पदार्थहरूले निम्न समस्याहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ:
कमजोर कपाल बाहिर झर्ने खतरा;
गंजापनको शुरुवात अवस्था;
ढिलो कपालको वृद्धि।
लोशन प्रयोग गरेपछि, कपाल छिटो बढ्न थाल्छ र स्वस्थ हुन्छ। सुस्त फोलिकल्सहरू पनि उठ्छन् र कपाल फुल्न थाल्छन्। अत्यधिक कपाल झर्ने रोकिन्छ। रंगीन वा in-salon रसायनिक उपचारका कारण कपाल बिग्रिएको छ र फेरि स्वस्थ दृष्टिकोण प्राप्त गर्दछ।
लोशनमा हल्का बनावट छ जसले चिल्लो केशलाई रोक्दछ। लोशन लगाए पछि तपाईको कपाल भारी हुँदैन।
उत्पादनलाई रिन्सिंग आवश्यक पर्दैन, जुन यसको एक लाभ हो। खुशीको कपाल छिटो समाहित हुन्छ।
परमान कपाल को उपयोग को contraindication
त्यहाँ यस उत्पादन को उपयोग गर्न को लागी कुनै contraindication छैन, प्रदान गरीन्छ कि कसरी तपाईं यसलाई सही रूप मा लागू गर्न थाहा छ। यो किनभने लोशनमा केवल प्राकृतिक हर्बल सामग्री हुन्छ। तिनीहरू hypoallergenic हो र खोपडीबाट नकारात्मक प्रतिक्रियाको कारण गर्दैन।
जहाँसम्म, यदि तपाईंको घाउ, घाउ, वा तपाईंको टाउकोमा चोट लागेको छ भने, यो उत्पादनको प्रयोगबाट पर्खनु र बेवास्ता गर्नु राम्रो हो।
उत्पादन गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाहरूको लागि पनि उपयुक्त छ! यो पुरुष र महिला दुबैको लागि समान रूपले प्रभावकारी छ, तिनीहरूको उमेरलाई ध्यान दिएर।
परमान कपाल लोशन को उपयोगको लागि निर्देशन
लोशन घरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसको अनुप्रयोगले धेरै समय लिदैन। सिफारिसहरू निम्नानुसार छन्:
हल्का शैम्पूले राम्रो कपाल धुनुहोस्। तपाईं पछि कपाल कन्डिशनर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तौलियाको साथ आफ्नो कपाल सुकाउनुहोस् र लगभग सुक्खा कपालमा लोशन लगाउनुहोस्। यो पनि तपाईंको स्क्याल्पमा लागू गर्न नबिर्सनुहोस्।
दुई मिनेटको लागि खोपडीमा बिस्तारै रगनुहोस्।
एक पटक जब उत्पाद समान रूपमा स्केलप र कपालमा वितरित हुन्छ, यसलाई अवशोषित गर्न छोड्नुहोस्।
यसलाई धुनु आवश्यक छैन। अनुप्रयोग पछि, तपाईं हेयरस्टाइलिंग उत्पादनहरू र हेयरड्राइयर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
अधिकतम प्रभावको लागि, निश्चित समयको लागि लोशन नियमित रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। कम्तिमा दुई महिनाको लागि हप्तामा 3-4 यसलाई लागू गर्नुहोस्।
ब्लिस कपालमा ग्राहक समीक्षा
उत्पादन बजारमा नयाँ छ र सिधा निर्माताबाट मात्र उपलब्ध छ। यो औषधि पसलहरुमा बेचिदैन। यद्यपि ब्लिस कपालको सकारात्मक समीक्षा धेरै छन्। यसका साथै उत्पादनले महिला र पुरुष दुबैलाई मद्दत गरेको छ।
मेरो पहिलो बच्चाको जन्म पछि, मलाई हार्मोनल डिसआर्डर भयो र मेरो कपाल झर्न थाल्यो। मैले मेरा कपालहरू फेरि प्रयोग गर्नका लागि सबै उपायहरू बनाएँ, लोक विधिहरू, कपालको देखभाल उत्पादनहरू, सैलून उपचारहरू सहित। केहि चीजहरूले मद्दत गरे, तर केवल छोटो समयको लागि। समग्रमा, मेरो कपाल कमजोर र निर्जीव रह्यो। जब मैले ब्लिस हेयर लोशनको अनलाइन विज्ञापन गरेको देखें, मैले यसलाई प्रयास गर्ने निर्णय गरें। यसले बोटको अर्का बाहेक केहि पनि समावेश गर्दैन, त्यसैले मलाई थाँहा थियो यसले परिस्थितिलाई नराम्रो बनाउँदैन। दुई हप्ता प्रयोग पछि, मैले याद गरे कि मेरो कपाल बलियो थियो। जब सम्म म पूरै बोतल प्रयोग गर्दिन, मेरो कपाल पूरै झर्दै गएको थियो। म पूर्ण विस्मयमा छु! म केहि महिना कुर्दै छु र फेरी परिणामलाई कडा बनाउनका लागि फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सुरू गर्नेछु।
यो मेरो पत्नी को कल्पना थियो कि ब्लिस कपाल किन्न जब मेरो कपाल भारी मात्रामा झर्ने शुरू भयो। कपाल झर्ने समस्या धेरै डरलाग्दो थियो। मलाई डर थियो कि म पूरै तालुमा पुग्नेछु। लोशन प्रयोग गर्न सजिलो र सुविधाजनक थियो: मैले केवल मेरो कपाल धोएर यसलाई लागू गर्नुपर्‍यो, यो मात्र हो। प्रयोगको एक महिना पछि, म लगभग मेरो कपाल झर्ने समस्या को बारे मा भूल थियो! नयाँ कपाल बढ्न थाले, मेरो कपाल पहिले भन्दा धेरै गाढा थियो। म यसलाई लामो समय देखि स्थायी र विश्वसनीय प्रभाव सुनिश्चित गर्न केहि अधिक प्रयोग गर्न जाँदैछु।
मैले केहि वर्ष पहिले परमिशन पाएँ, र रसायनले मेरो कपाललाई बिगार्‍यो। मलाई चाहिएको सबै मनमोहक कर्लहरू लिनु थियो, तर यसको सट्टा समस्याहरूको गुच्छा भयो: सुख्खा र विभाजन टुक्रिन्छ, चिल्लो जराहरू, सक्रिय कपाल झर्ने… मेरो बाथटब सधैं धुने पछि कपालले भरिएको थियो। म हताश थिए! मेरो कपालले भर्खरै मलाई ब्लिस कपाल भनिनको नयाँ उत्पादन प्रयोग गर्न सिफारिस गर्यो। मैले निर्माताको आधिकारिक साइटबाट यसको अर्डर गरें किनभने म यो पसलमा फेला पार्न सक्दिन। केहि प्रयोग पछि, कपाल झर्नु लगभग रोकिन्छ र मेरो कपाल धेरै स्वस्थ देखिन्छ। मलाई पहिलो परिणामहरू मनपर्दछ, त्यसैले म यससँग जाँदैछु।
यसैले, परमान कपालले कपाल झर्ने रोक्न, विभाजन टुप्पो र चिल्लो जरा हटाउन, र कमजोर र पातलो कपाललाई मद्दत गर्दछ।